भारतले कोभिड-१९ को खोपलाई अनुमित दिने ,नेपालमा कहिले ? - ParyatanBazar.com
भारतले कोभिड-१९ को खोपलाई अनुमित दिने ,नेपालमा कहिले ?
पुस १७, काठमाडौं । भारतले कोभिड-१९ को खोपलाई छिट्टै अनुमित दिने भएको छ । भारतको ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डियाका भिजी सोमानीले बिहीबार आयोजना गरिएको एक वेबिनारमा अनुमति दिने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सेरमले आष्ट्राजेनिकासँग अक्सफोर्डको भ्याक्सिन ल्याउनको लागि साझेदारी गरेको छ । वेलायतमा सो भ्याक्सिनले प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेको छ ।
भारतमा अनुमति पाउनसाथ नेपालका पनि आपत्कालिन प्रयोगका लागि ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भने,’भारतका विभिन्न सम्बन्धी निकाय र खोप उत्पादन कम्पनीहरुसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु ।’
सरकारले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप भारतबाट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
भेटमा खोपको खरिद र आपूर्तिमा सहकार्य गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।सरकारले भारतमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने वित्तिकै नेपालमा पनि खोप ल्याउने बताएको छ ।
बेथानञ्चोक – यात्रा एक अनुभव अनेक !